Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Alaska Airlines izisa iijeti ezili-12 ezintsha zeBoeing 737-9
Airlines • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukhetho olusetyenziselwe ukuhambisa ngo-2023 no-2024 luyaqhubeka ukuphucula imeko yezezimali kunye nokuzinza kweAlaska.
I-Alaska Airlines ikhawulezisa ukukhula kwayo.
Iinqwelo-moya zeAlaska ezisebenzisa ukhetho kwangoko kwiinqwelomoya eziyi-12 ze-Boeing 737-9.
Iinqwelomoya ezikhethiweyo ngoku zizibophelelo eziqinileyo ku-2023 no-2024.
I-Alaska Airlines ibhengeze namhlanje ukuba iyakhawulezisa ukukhula kwayo ngenqanawa ngokusebenzisa ukhetho lwangoku kwangoko ngenqwelomoya ye-Boeing 12-737. Inqwelomoya yeenqwelomoya ngoku zizibophelelo eziqinisekileyo ku-9 no-2023. Oku kuzinikela kuzisa i-Alaska kwi-2024-737 iyonke kwi-9 yeenqwelo moya, ezintlanu zazo ngoku zisebenza.
Alaska Airlines ubhengeze isivumelwano sokuhlengahlengiswa kunye neBoeing ngoDisemba 2020 yokufumana i-68 Inqwelo moya yeBoeing 737-9 phakathi konyaka wama-2021 ukuya kowama-2024, kunye nezinye iindlela ezingama-52 zokuhambisa phakathi konyaka wama-2023 nowama-2026. Njengenxalenye yale ntengiselwano, iAlaska iya kongeza iinketho ezingama-25 zokubuyisa ezo zisetyenzisiweyo.
"Sinovuyo ukukhawulezisa ukukhula kwe-Alaska, sakhele kwisiseko esomeleleyo semali esisenze sakwazi ukujamelana nalo bhubhane," utshilo uNat Pieper, usekela mongameli wee-Airlines eAlaska Airlines, kwezemali nakwimanyano. "Ezi nqwelo moya zilumkile, ixesha elide kutyalo-mali kwishishini lethu esinokuzenza ngelixa kwangaxeshanye sigcina iphepha lethu elomeleleyo."
Ukuhanjiswa 2021 2022 2023 2024 BEBONKE
Umyalelo oQinisekileyo woQinisekiso 12 31 13 12 68
Ngamana uKhetho lokuZilolonga - - 9 4 13
Ukhetho lokuzilolonga ngo-Agasti - - 10 2 12
BEBONKE 12 31 32 18 93
“IBoeing iyaqhubeka nokuba liqabane e-Alaska. Siqale ukubhabha ii-737-9 zethu zokuqala kule ntwasahlobo idlulileyo, kwaye sonwabile kakhulu yindlela yokusebenza kwenqwelomoya, ukusebenza kwezemali kunye nokusingqongileyo, ”utshilo uPieper. "Iiplanethi zingaphezulu kokulindeleyo-ukusuka kwindlela ezithe cwaka ngayo iinjini ukuya kuluhlu olukhulu ezisibonelelayo-kwaye iindwendwe zethu ziyazithanda."
I-Alaska's 737-9s zilungiselelwe ukuba zithwale iindwendwe ezili-178 ezinezihlalo ezili-16 zeKlasi yokuQala kunye nezihlalo ezingama-24 zePrimiyamu, ezibonelela ngeyona legroom yeprimiyamu yayo nayiphi na inqwelo moya yaseMelika.